Wasaarada Arrimaha Gudaha oo Xiisad ay haraysay, kadib Wareegtooyin iska soo hor jeeda. – Hornafrik Media Network
Wasaarada Arrimaha Gudaha oo Xiisad ay haraysay, kadib Wareegtooyin iska soo hor jeeda.
By HornAfrik	 On Jul 22, 2017
Xiisad ayaa ka dhalatay shaqo joojintii uu Wasiirka Arrimaha Gudaha ku sameeyay Xoghayihii Joogtada ee Wasaaradda, Yaxye Cali Ibraahim, iyadoo warqad jawaab oo ka soo kala baxday Wasiiru dowlaha iyo Wasiir kuxigeenka Wasaaradda Arrimaha Gudaha ay kaga soo hor-jeesteen xil ka qaadistaas, kuna tilmaameen sharci darro.
Warqada ka soo baxday Wasiiru dowlaha Wasaaradda Arrimaha Gudaha C/llaahi Faarax Wehliye oo nuqul ka mid ah ay heshay Hornafrik ayaa lagu tilmaamay inay sharci darro tahay shaqo joojinta iyo magacaabista Xoghayaha Joogtada KMG ee Wasaaradda.
Wasiiru dowlaha ayaa sheegay in magacaabista iyo xil ka qaadista Xoghaye Joogto ay u baahan tahay in la marsiiyo Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha, kadibna laga ansixiyo Golaha Wasiirada, laguna soo saaro digreeto Madaxweyne.
Sidoo kale Wasiiru dowlaha ayaa difaacay Xoghayihii joogtada Yaxye Cali Ibraahim, isagoo xusay in eedeyntii ku qorneyd warqadii shaqo joojinta ay aheyd mid aan waafaqsaneyn xaqiiqada.
Dhinaca kale Wasiir kuxigeenka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Cali Sheekh Maxamed Nuur ayaa isna ka soo horjeestay xil ka qaadista uu sameeyay Wasiirka Arrimaha Gudaha Mr Juxa, isagoo ku tilmaamay inay tahay mid sharci darro ah oo aan waafaqsaneyn dastuurka.
Wararka qaar ayaa sheegaya shaqo joojinta lagu sameeyay Xoghayihii joogtada ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha, Yaxye Cali Ibraahim uu ka carooday Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre oo aan laga tala galin, iyadoo la sheegayo in warqada Wasiir kuxigeenka iyo tan Wasiiru dowlaha ka soo baxday ay tahay mid taageero ka heysata Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha.
Horay waxay Wasiiradda Haweenka iyo Warfaafinta Shaqo joojin ugu sameeyeen Agaasimiyaashii Guud ee Wasaaradahaasi, iyagoona magacaabay Agaasimayaal KMG ah, mana jirin wax is qabqabsi ah oo ka dhashay Go’aanadda ay gaareen Wasiiradaasi, balse Wasiir Juxa ayaa go’aankiisa waxa uu noqday mid xiisan xooggan ay ka dhalatay.
Maxkamadda Sare ee Somalia oo ku gacan sayrtay Go’aankii Baarlamaanka ka soo baxay Maanta.